तिमीहरू सबैले अब परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको साँचो अर्थलाई बुझ्नुपर्छ। मैले यसअघि बताएको परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको अर्थ तिमीहरूको सकारात्मक प्रवेशसँग सम्बन्धित छ। आज फरक छ: आज, म परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासको सारतत्वको बारेमा विश्लेषण गर्न चाहन्छु। निश्चय नै, यसले तिमीहरूलाई नकारात्मक पक्षबाट मार्गदर्शन गरिरहेको छ; यदि मैले यसो नगरेको भए, तिमीहरूले कहिल्यै आफ्ना साँचो अनुहार चिन्ने थिएनौ, र सदा आफ्ना भक्ति र विश्‍वसनीयताको बखान गर्थ्यौ। यो भन्नु उचित हुन्छ कि यदि मैले तिमीहरूका हृदयका गहिराइमा भएका कुरूपतालाई उजागर गरिनँ भने, तिमीहरू हरेकले आफ्ना शिरमाथि मुकुट पहिरिन्थ्यौ र सम्पूर्ण महिमा आफ्नै निम्ति राख्थ्यौ। तिमीहरूका अहङ्कारी र घमण्डी स्वभावहरूले तिमीहरूका आफ्नै विवेकलाई प्रकट गर्न, ख्रीष्टविरुद्ध विद्रोह गर्न र प्रतिवाद गर्न, अनि तिमीहरूका कुरूपता प्रकट गर्न विवश पार्छ र यसरी तिमीहरूका अभिप्राय, धारणा, अनावश्यक लालसा, र लोभले भरिएका आँखाहरूलाई उजागर गरिदिन्छ। तैपनि तिमीहरूले ख्रीष्टको कामको निम्ति आफ्नो जीवनभरिको उत्कट इच्छा र ख्रीष्टले उहिले नै पटक-पटक बताउनुभएका सत्यहरू बकबक गरिरहन्छौ। यो तिमीहरूको “विश्‍वास” हो—तिमीहरूको “विशुद्ध विश्‍वास”। मैले मानिसलाई सँधै नै कडा मापदण्डमा राखेको छु। यदि अभिप्राय र सर्तहरूसहित तेरो बफादारिता आउँछ भने, म बरु तेरो कथित बफादारिताविना रहन चाहन्छु, किनकी मलाई आफ्‍ना अभिप्रायहरूद्वारा धोका दिने र सर्तहरूद्वारा जबरजस्ती गर्नेहरूलाई म घृणा गर्छु। मानिस मप्रति पूर्ण रूपमा बफादार होस्, र उसले एउटै शब्‍द, अर्थात् विश्‍वासको खातिर र त्यसलाई प्रमाणित गर्नको लागि सबै कुरा गरोस् भन्‍ने मात्रै म कामना गर्छु। मलाई खुशी पार्न कोसिस गर्ने तिमीहरूको चापलुसीको प्रयोगलाई म घृणा गर्छु, किनकि मैले सधैँ तिमीहरूलाई इमानदारिताले व्यवहार गरेको छु, र त्यसैले तिमीहरूले पनि मप्रति साँचो विश्‍वासले काम गरको चाहन्छु। जब विश्‍वासको कुरा आउँछ, धेरैले सोच्न सक्छन् कि तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई पछ्याउँछन् किनभने तिनीहरूसँग विश्‍वास छ र नत्रभने तिनीहरूले यस्ता कष्ट सहँदैनथे। त्यसैले म तँलाई यी कुरा सोध्छु: यदि तैँले परमेश्‍वरको अस्तित्वमा विश्‍वास गर्छस् भने, किन तँ उहाँलाई आदर गर्दैनस्? यदि तैँले परमेश्‍वरको अस्तित्वमा विश्‍वास गर्छस् भने, किन तेरो हृदयमा उहाँको थोरै भय पनि छैन? यदि तैँले ख्रीष्ट देहधारी परमेश्‍वर हुनुभएको हो भनी स्वीकार गर्छस् भने, तैँले उहाँलाई किन घृणा गर्छस्? किन तैँले उहाँप्रति श्रद्धाविहीन भई कार्य गर्छस्? किन तैँले उहाँलाई खुल्लम-खुल्ला मूल्याङ्कन गर्छस्? किन तैँले सधैँ उहाँका गतिविधिहरूमाथि जासुसी गर्छस्? किन तँ उहाँका प्रबन्धहरूप्रति समर्पित हुँदैनस्? किन तँ उहाँको वचनअनुरूप काम गर्दैनस्? किन तैँले उहाँबाट उहाँका भेटीहरू जबरजस्ती खोस्ने र लुट्ने कोसिस गर्छस्? किन तँ ख्रीष्टको स्थानबाट बोल्छस्? किन तैँले उहाँको काम र उहाँको वचन सही छ कि छैन भनी मूल्याङ्कन गर्छस्? किन तैँले उहाँको पिठ्यूँपछाडि उहाँको ईश्‍वरनिन्दा गर्ने साहस गर्छस्? के तेरो विश्‍वास यी र अन्य कुराहरूले निर्मित छ?
आज, धेरैजसो अविश्‍वास तिमीहरूभित्र नै रहिरहन्छ। तिमीहरूले आफैभित्र राम्ररी नियालेर हेर, र तिमीहरूले निश्चय नै जवाफ भेट्टाउनेछौ। जब तैंले वास्तविक जवाफ भेट्टाउँछस्, तब तैँले तँ परमेश्‍वरको विश्‍वासी होइनस्, बरु उहाँलाई छल गर्ने, निन्दा गर्ने र धोका दिने, र उहाँप्रति बफादार नरहने व्यक्ति होस् भनी स्वीकार गर्नेछस्। त्यसपछि तैंले ख्रीष्ट मानिस हुनुहुन्न, परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी महसुस गर्नेछस्। जब त्यो दिन आउँछ, तैंले ख्रीष्टलाई सम्मान गर्नेछस्, तँ उहाँप्रति डराउँनेछस् र तैँले साँचो रूपले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नेछस्। हालको समयमा, तिमीहरूका हृदयका तीस प्रतिशत भाग मात्र विश्‍वासले भरिएको छ, जबकि अरू सत्तरी प्रतिशत शङ्काले भरिएको छ। ख्रीष्टले गर्नुहुने र भन्नुहुने हरेक कुराबाट उहाँप्रतिको तिमीहरूका धारणा र रायहरू, अर्थात् उहाँमाथिको तिमीहरूको पूर्ण अविश्‍वासबाट पलाउने धारणा र रायहरू आउँछन्। तिमीहरूले स्वर्गमा हुनुहुने अदृष्य परमेश्‍वरको मात्र सराहना गर्छौ र डर मान्छौं, र पृथ्वीमा हुनुहुने जीवित ख्रीष्टको निम्ति कुनै आदर गर्दैनौ। के यो पनि तिमीहरूको अविश्‍वास होइन र? तिमीहरू विगतमा काम गर्नुहुने परमेश्‍वरको निम्ति मात्र लालायित हुन्छौं, तर आजको ख्रीष्टको सामना गर्दैनौ। यो सबै सदा तिमीहरूका हृदयमा मिसिएको “विश्‍वास” अर्थात् आजको ख्रीष्टमा भरोसा नगर्ने विश्‍वास हो। मैले कुनै पनि तरिकाले तिमीहरूलाई कमको ठानेको छैन, किनकि तिमीहरूभित्र अत्यन्तै धेरै अविश्‍वास छ, अशुद्ध भएका र विच्छेदन गरिनुपर्ने तिमीहरूका धेरै कुराहरू छन्। यी अशुद्धताहरू तिमीहरूसँग कुनै विश्‍वास नै छैन भन्‍ने कुराको संकेत हो; ती त तिमीहरूले ख्रीष्टलाई त्यागेको निशान हो र तिनले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको धोकेबाज भनी कलङ्क लगाउँछन्। तिनीहरू ख्रीष्टसम्‍बन्धी तिमीहरूको ज्ञानलाई ढाक्ने घुम्टो, ख्रीष्टद्वारा तिमीहरूलाई हासिल गरिने कार्यको लागि बाधा, ख्रीष्टसँगको तिमीहरूको अनुकूलताको लागि रोकावट, र ख्रीष्टले तिमीहरूलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने कुराका प्रमाण हुन्। तिमीहरूको जीवनका सम्पूर्ण भागहरूलाई जाँच गर्ने समय अहिले नै हो! त्यसो गरेमा, त्यसले तिमीहरूलाई कल्‍पना गर्न सकिने हरेक तरिकाले फाइदा पुर्‍याउनेछ!